Gbanwee nhazi UTM na geographic na Excel - Geofumadas
Gwa UTM na Geographic na-ejikọta Excel
Febụwarị, 2008 AutoCAD-AutoDesk, Cartografia, downloads, Google Earth / Maps
Na post gara aga anyị gosiri akwụkwọ Excel iji tọghata nhazi Geographic na UTM site na mpempe akwụkwọ nke Gabriel Ortiz ama ama.
Ka anyị hụ ugbu a ngwá ọrụ a nke na-eme otu usoro ahụ azu, ya bụ, inwe nhazi na usoro UTM (Universal Traverso de Mercator) na ịmara mpaghara ahụ, gbanwee ha na ọnọdụ udo na ogologo oge.
Ka na-amalite familiarizing anyị onwe anyị na nke a: ka Google Earth, na-achịkọta ndị Palacio de los Deportes na Mexico ga-X = 489513.59, Y = 2,145,667.38 na-ewere na Google Earth na-eji dị ka datum WGS84. (maka ihe ị na-amaghị, iji hụ nhazi UTM ị na-aga ngwaọrụ / nhọrọ / vista3D / show lat / long)
N'ime nhazi ala, nke a ga-abụ ogologo = -8 ° -5 '-59 ", lat = 19 ° 24' 18", (iji gosipụta grid na Google Earth, pịa “nlele / grid”)
Ana m akwado ka ị mara onwe gị na ụzọ nyocha na nghọta otú ọrụ UTM si arụ ọrụ iji nweta ihe kachasị na ngwá ọrụ na Excel.
Emewo m mpempe akwụkwọ a nke ahụ ga-aba nnọọ uru nye enyi ya nke na-achọ ugbu a iziga Google Earth ụfọdụ data dị na UTM.
1 Esi tinye data
Ngalaba na-acha odo odo na-anakọta njikwa XY, yana mpaghara, na nke a, ị ghaghị ịkpachapụ anya n'ihi na Mexico na-enye ihe atụ, mpaghara ahụ si na 16 gaa na 21 ka otu nhazi ahụ nwere ike ịnọ n'akụkụ dị iche.
Otu ihe a na-eme na ebe ugwu, dị ka ọ dị na Colombia, Ecuador na Brazil nke nwere mpaghara ma n'ebe ugwu ma n'ebe ndịda.
Nakwa n'elu akụkụ bụ spheroid na-edekọ aha nke ejikọtara UTM, nke a abụghị maka nhazi mmepụta kama ọ bụ maka nhazi ntinye.
2. Ihe nputaputa
Ogidi dị iche iche na-acha akwụkwọ ndụ bụ ndị nlekọta ala, nhazi nke dị n'ebe ọwụwa anyanwụ nke Greenwich meridian ga-adị mma, ndị nọ n'ebe ọdịda anyanwụ ọwụwa anyanwụ ga-adị njọ.
3 Otu esi eziga ha na Google Earth
Anyị ahụworị ụzọ ụfọdụ iji zipụ faịlụ Excel na Google Earth, ma geographic na UTM, lee anya, ma ọ bụrụ na ịchọrọ iziga nhazi UTM na AutoCAD, Ụdị Excel a na-enye gị ohere ime ya.
N'ebe a ị nwere ike ibudata ndebiri iji gbanwee njikọ UTM na Geographic.
Ị nwere ike ịzụta ya kaadị akwụmụgwọ.
Ọ bụ ihe atụ ma ọ bụrụ na mmadụ echebara uru ọ na-enye na ebe ọ ga-esi nweta ya.
Muta otu esi eme ihe ndia na ndi ozo n’ime Excel-CAD-GIS cheat course.
Coupons Google Earth Office maka egwu
Previous Post«Previous Ụdị Excel iji tọghata site na Geographic Coordinates ka UTM
Next Post Achọrọ m itinye blog nkewa, onye ka m ga-ede maka?Next »
109 Na-aza "Tugharị njikwa UTM na ngalaba nhazi ala na Excel"
September, 2020 na
Jose Solorzano Pinto kwuru, sị:
Echiche niile gara aga bụ ụbọchị ndị gara aga, maka taa Septemba 2020, dịka ụdị ndị a ka dị, teknụzụ nke oge ahụ dị iche na ụbọchị nke taa, ọ ga-adịgide n'ike, enwere ọdịiche?
October, 2018 na
Anyị ezigala ya email gị. N'ezie ọ gara na folda spam.
Javier Galofre kwuru, sị:
Nanị m zụtara ihe nlereanya ma ọ dịghị ihe batara m. Biko ị nwere ike lelee izipu nke a?
Tisti kwuru, sị:
March, 2014 na
Site n'ụzọ, achọtara m weebụsaịtị a ma enwere m mmasị. Ọ ka ga-ewute m na nwa oge, mana ọ mara mma.
Achọpụtaghị m ebe m ga-ebudata ya…. Ebee ka tebụl ahụ magburu onwe ya dị?
LUIS LARA kwuru, sị:
Jenụwarị, 2014 na
Achọghị m ebe m ga-ebelata ya !!
June, 2013 na
Ị nwere ike inye anyị ihe atụ?
Frank kwuru, sị:
Achọrọ m ịma ihe mere m ji esonye otu nhazi nke ala ahụ m na - ekpebi ụdị dị iche iche dịka ọmụmaatụ
Efrain Peña Borda kwuru, sị:
February, 2013 na
q mmemme maka windo nleta windo ma ọ bụ mpempe akwụkwọ kachasị m nwere ike iji na ibudata maka nnwere onwe iji gbanwee njedebe ụgbọelu na ala ma ọ bụ viseversa, ana m ekele gị n'ọdịnihu maka uche gị ugbu a.
Jiri obi ekele,
Jonathan Cardiel kwuru, sị:
November, 2012 na
N'ezie, ọtụtụ ihe karịa nke ahụ.
Ọ ga-amasị m ịma ma ọ bụrụ na tebụl gị, m nwere ike ịmegharị (site na UTM na GEOGRAPHIC) ọtụtụ nhazi n'otu oge ahụ. Ọtụtụ dị ka 1000.
Ana m echere gị ngwa ngwa, ekele.
October, 2012 na
Anyị enweghị template iji gbanwee GTM na UTM.
pedro luis kpọmkwem kwuru, sị:
Enwere m mmasị n'onwe m na template mpụ iji tọghata kọntaktị GTM TO UTM NA MGBE
Biko zigara m nọmba akaụntụ nke uru nke ndebiri
Ernesto kwuru, sị:
Hi, enwere m akwụkwọ mpịakọta nke ụda iji gaa site na ogo ogo ruo ogo, nkeji, sekọnd.
Soro m aka
JOSE LUIS kwuru, sị:
Enwere m ekele nke ukwuu, m ga-ahụ ụdị ịkwụ ụgwọ kachasị mfe m nwere ike ime ya.
Ndewo José Luis
Enweghị nsogbu, template nwere ogidi ebe ọ na-akwado na ị tinye ha na usoro nha.
Ozugbo ị zụrụ ya, ị kpọtụrụ anyị na anyị ga-agwa gị otu esi eme ya.
Ezigbo, ihe m chọrọ bụ ka m nwee ike igosi esemokwu ndị dị na MicroStation V8i, mana aka MyHeld na-ejide ha na m akara aka akara aka dị ka LAT W89.14298 N13.71391, m ga-agbanwe ha na XY, templeti dị elu na-ajụ maka ha na ogo, nkeji na sekọnd.
Ị nwere ike inyere m aka na nke a? Daalụ
Mbụ, ekele maka mmasị gị.
Lelee ihe ị na-achọ, dị ka template a si na UTM gbanwee gaa na ala ma e nwere ndị ọzọ ndebiri nke ga-eme ihe ị chọrọ.
Hụ na nke a njikọ ndị ọzọ ndebiri ndebiri.
AJỤJỤ Ị PỤRỤ ỊHỤTA ỤLỌ MGBE Ị GA-ECHI EKWESỊRỤ ỤBỤRỤ NA NKWA Ị GA-EME.
August, 2012 na
Mba. Ihe edere na ederede nwere ike igbanwe site na UTM na Geographical.
Ma otu gbasara isiokwu a ọzọ ma ọ bụrụ na ị nwere ike ime ihe ị chọrọ
VICENTE DU kwuru, sị:
I nwere ike iji akwukwo ozo iji gbanwee nhazi mpaghara
Nhazi UTM na dika
Gustavo Hernandez kwuru, sị:
M nwere ike ịkwado ibe m, enwere .exe dabeere na usoro nke Gabriel Ortiz, ọ bụghị ihe amanyere mana, mana m ga-achọ itinye ụfọdụ okwu, enwere m olileanya na ị ga-eje ozi, ekele.
Christian kwuru, sị:
Douglas kwuru, sị:
June, 2012 na
Kedu ka m ga-esi tọghata kọntaktị UTM na nhazi njikwa ala?
Ọfọn, template na-arụ ọrụ n'enweghị nsogbu
Ọ bụrụ na ị hapụ anyị ihe atụ, anyị nwere ike nyochaa.
Kedu ihe nhazi ndị ị batara, mpaghara ole, ihe nsonaazụ ị na-ewepụta, mba ị nọ na ya anyị na-enyocha iji hụ ihe na-eme. Ekwula okwu banyere nkewa iche ma ọ bụ puku kwuru puku.
Gwa ya kwuru, sị:
Hi, M zụtara akwụkwọ mpempe akwụkwọ ahụ, m na-etinye nchịkọta iji tọghata ha ma ha zipụrụ m na kọntinent ahụ. O nwere ike ịbụ na ọ bụ maka mpaghara ahụ, n'ụdị a ọ na-etinye mpaghara 15, maka mpaghara mpaghara Chile nke m kwesịrị itinye?
April, 2012 na
Ndewo Shaviola, ebe a ka anyị kere template nke na-amasị gị
Enweghị ndebiri na Geofumadas dịka nke ị biri. Enwere otu ma ihe ọ na-eme bụ ntụgharị, na-agbanwe site na ogo gaa n'ọzara
Shaviola kwuru, sị:
Hi, Achọrọ m iji tọghata nghazi na ogo ogo na nhazi na ogo, minit na sekọnd.
March, 2012 na
N’ezie ịhazi ya Ọ dịkwa njọ, n’ihi na ọnọdụ latitude na-amalite n’Ekwedọọ na mgbe ọ ruru El Salvador ọ bụ ọnụ ọgụgụ karịrị otu nde. Lelee ya n'ihi na o doro anya na nsogbu ahụ dị.
Na-acha ọcha kwuru, sị:
Ọ bụ na obodo a ọdịiche nke ịdị ogologo na ogo dị iche n'etiti 87 Celsius na 89 ° na oghere n'etiti 13 Celsius na 14 ° bụ obodo Central America.
X = 439188.2040 na Y = 316859.3910
Ee mana anyị agaghị ama ihe anyị ga-ekwu. Kedụ ka isi mara nke a ga-enye?
Kedu Datum ị jiri?
Dee nhazi ebe a na mita, anyị ga-anwa onye ntụgharị anyị iji hụ ma ọ bụrụ na ị chọghị.
lee, jiri onye ntụgharị okwu site na mita ruo ogo na nsonaazụ m ga-enye bụ 89 ° longitude na 13 ° latitude, mana o nyere m 89 ° na 2 ° latitude na-eji mpaghara 16 na northwest hemisphere m kwesịrị ịma ihe ọ na-eme
RAUL MACIAS BỤ kwuru, sị:
enwere obi google na-anabata itinye isi ya na ndi nhazi UTM bu 6.2.1.6014 (beta)
Ị pịa na njikọ ahụ na-ekwu, sị:
Ebe i nwere ike ibudata
Ma ọ bụ na bọtịnụ na-ekwu "zụta ugbu a"
Luis Gallardo kwuru, sị:
Enweghị m ike ịchọta ụzọ m ga-esi zite 2 dollar ma ana m achọ ibudata nhazi usoro nhazi ahụ ngwa ngwa.
Cris kwuru, sị:
February, 2012 na
Ana m ekele gị nke ukwuu
Chọpụta, pụọ na ntupu ahụ. Ọ dị ebe ahụ.
Ọ dị mma ma enwere ike ịnweta maapụ nke Venezuela nke na-agwa m site na mpaghara isi ala ma ọ bụ mpaghara dị?
WGS84 REGVen na-eme ka UTM WGS84 dị
Hi, enwere m obi abụọ. Nchịkọta UTM bụ otu akwụkwọ ahụ? bu na achoro m imata ebe ebe ndi Venezuela kewara, į nwere ike inyere m aka na nke a?
N'ọnọdụ ụfọdụ, enwere ike ime na nbudata ahụ kwụsịrị, ma ọ bụ na Proxi nke ị na - ejikọ, na - egbochi nbudata ahụ. Agbanyeghị, ọ bụrụ na nke a mere, ịnwere ike iji akwụkwọ ozi kọwaa ya.
Anyị ezigala template na email gị.
William kwuru, sị:
heeeey kwụọ dollar 2, ekwekwala ka m budata ndebiri dị elu
Kedu ihe m ga - eme?
Na-arụ ọrụ na mpaghara ọ bụla
cyc kwuru, sị:
Echere m na mpaghara 14 ma ọ bụ na ọ na-arụ ọrụ na mpaghara niile
Kedu ihe 14 pụtara?
Usoro ndị a ọ na-arụ maka 14?
Juan kwuru, sị:
Enwere m ekele maka ozi ahụ
Enweghị ike, Google Earth anaghị anabata ntinye nhazi na usoro UTM. Ihe kachasị dị irè bụ na ị na-eme ya na mmemme GIS dị ka Microstation, gvSIG ma ọ bụ QGis, wee bupụ ya na kml iji hụ ya na Google Earth.
Enrique Arizabalo kwuru, sị:
Hi, anya, enwere m mmasị na nhazi ahụ. Achọrọ m ịma otú m si etinye nkwado m na Google Earth n'ọdịnihu, Gracesco, enyemaka.
October, 2011 na
Ndewo Miguel. Banyere ajụjụ gị:
-Nchịkọta ndị Google Earth gosipụtara na ndị nke ị na-ekwu maka ha bụ ndị amaara dịka UTM. Usoro a na-ekewa kọntinenti n'ime mpaghara 60 nke na-aga site na mkpanaka gaa na mkpanaka, ogo 6 dị ogologo. Na mpaghara ọwụwa anyanwụ, mpaghara nke ọ bụla nwere 500,000 dị ka onye meridian nke etiti ma si otú a na-abawanye ma ọ bụ belata ruo mgbe ọ ruru oke nke mpaghara ahụ, yabụ a na-emeghachi nhazi na mpaghara na mpaghara nke ọ bụla, mana ọ dịghị njọ. N’ebe ugwu, ọ na-amalite site na efu site na igwe ekwu okwu, na mpaghara osisi ogwe aka nke ugwu na n'ebe ndịda, ọ na-amalite na ogwe osisi ruo mgbe ọ ruru akara.
Usoro a na - ebute ihe isi ike na mba ndị na - etinye aka na mpaghara karịrị otu, n'ihe gbasara Colombia ọ dị n'etiti mpaghara 17, 18 na 19. Na mgbakwunye, ọ nwere ikike nke inwe ngalaba na mpaghara ugwu ugwu na nke ọzọ na hemisphere ndịda.
Ya mere, mba ndị ahụ na-ahọrọ ịhọrọ usoro ụgha, iji belata mgbagwoju anya nke a, ọ bụkwa ya mere na ọ gaghị ekwe omume maka nhazi ahụ iji kwekọọ na Google Earth gosipụtara.
Iji mee mgbanwe ahụ, Ụlọ Ọrụ Geographic nwere ozi dịka nke a:
I nwekwara ike ileba anya na njikọ ndị a:
Mgbe ị na-abanye na ibe weebụ, n'ihi na m na-achọ ozi nke nhazi ndị m na-akọwa n'okpuru ebe a:
Na map nke Colombia nke IGAC (Instituto Geografico Agustin Codazzi kwadebere), nhazi nke map ahụ ekwuru ekwenyeghi na nhazi nke Google Earth map:
Ka ihe atụ, map na-achịkọta ndị Colombia, chọta ihe kpọmkwem ntụpọ ka nnọọ n'ebe ndịda nke Puerto Wilches 1021223E, 1302614N ndị a na-achịkọta agaghị enwe ike ịchọta map nke Google Earth, nwere ike ịkọwa ihe dị iche?
Na mgbakwunye, dịka okwu na-achọsi ike, na-ewere site na Google Earth map, nke ka nke ọma na ngalaba nke Nariño a hụrụ na ndị na-ahazi ihe na-aga site na West ruo East, anyị na-ewere ikpe nke Tumaco, dị na 748650 E, ma ọ bụrụ na anyị na-aga n'ihu na otu nhazi chee ihu n'ebe ọwụwa anyanwụ, ọ na-adọrọ mmasị na mgbe ọ bịarutere na 833969E na ọ gbanwe obere oge ka ọ laghachi na 166030E. Ọ na --eme na na Google Earth site na equator ruo North na-amalite na 0.0, na agbanyeghị na IGAC nwere nhazi nke ya na igwe ekwu.
Na mmechi, olee otu aga --esi mee mgbanwe site na njikọta nke IGAC na Google Earth?
Ana m ekele gị tupu oge gị maka mmekọrịta gị bara uru na ịkọwa ọnọdụ a dị mgbagwoju anya.
Pablo kwuru, sị:
September, 2011 na
Dị nnọọ mma mmegharị nke na-arụ ọrụ nke Gabriel Ortis, m na-eji ya na Win XP ma m ịgbanwee W7 na m nwere ike na-eji ya, ọ bụ nnọọ uru na-eji ihe ka a kml file nke na-agụ google ụwa, ma ọ bụrụ na ị na-enye m ihe email m zitere mmezi.
August, 2011 na
O doro anya na ị ga-ahapụ ihe ndị sekọndrị.
Tinye aha gị ... kwuru, sị:
ma oburu na enweghi m oge m nwere ike igbanwe ha ka ha buru
Carlos kwuru, sị:
Oscar alvarado kwuru, sị:
July, 2011 na
akwa ngwá ọrụ iji nwee otu ihe ahụ iji tọghata njikwa UTM na geographies
ARNALDO SALAZAR kwuru, sị:
Ike, 2011 na
Anwalewo m ya site na isi ihe nhazi National Cartography nke Venezuela ma ọ na-enye otu nsonaazụ ahụ. daalụ
Javier kwuru, sị:
Ana m ekele gị maka onyinye gị.
April, 2011 na
Vitos, iji mee mgbanwe na ntụgharị, ma ọ bụ site na Obodo gaa UTM ị nwere ike ịlele nke a Geofumadas njikọ
vitos kwuru, sị:
November, 2010 na
Achọrọ m ịgbanwe data a W 14 ° 51 ′ 16.59 »YS 90 ° 51 ′ 50.1» ka UTM
September, 2010 na
Onyinye dị ukwuu, na-arụ ọrụ zuru oke n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnọdụ niile, ma ọ bụ site na njedebe nke usoro ahụ. Ana m ekele gị nke ukwuu maka ịkekọrịta ya na weebụ.
Akwa ekele !!
Andy kwuru, sị:
July, 2010 na
Daalụ maka ịkekọrịta tebụl ndị a na ndị mmadụ.
ha bara ezigbo uru
Magin64 kwuru, sị:
June, 2010 na
1 Giga Daalụ maka onyinye a na blog, karịa ndị magburu onwe, clickcidades (Dịrị informatic ekele !!) nwere ike ibudata na Excel spreadsheet ala ka UTM, ma njikọ nyere ebe a nwere ike ọ bụghị, ie UTM ala, ụfọdụ ntụziaka pụrụ iche? Daalụ
victor ramirez kwuru, sị:
Ọ bụ ihe magburu onwe ngwá ọrụ ...
Onwere mgbe ufodu ndi n’enwe obi ojoo ma ha achoghi ikesa ihe omuma ha ma achoro m na imesapuru .. ekele maka ngwa oru gi ...
gaa n'ihu ..
Ike, 2010 na
Dị ka njikọ a si dị:
Google Earth na-eji ejiji dị iche iche na Datum WGS84
Argentina gụnyere mpaghara 18,19.20,21,22 dika njikọ a
mercedes kwuru, sị:
Enwere m ichota onyinyo nke Bs Dị ka., Argentina na ihe ndị e si na google ụwa, onye ọ bụla maara ihe bụ spheroid na nchịkọta nke Google Earth ji na ebe mpaghara Argentina? Iji mee georeferencing, Erdas jụrụ m maka data ahụ.
Chọpụta, na njikọ a site Gabriel Ortiz Ị nwere ike ịhụ usoro.
Rodrigo kwuru, sị:
Hi! Ezi onyinye. Otú ọ dị, ị nwere ike ịnye m usoro iji mee ya nanị na onye nyocha?
alonso kwuru, sị:
Jenụwarị, 2010 na
Ntughari ngwá ọrụ
Daalụ! na ekele sitere na Spain!
Benancio kwuru, sị:
December, 2009 na
utm okirikiri na - ahazi onye ntụgharị
Ronald kwuru, sị:
Daalụ, ezi echiche
Echere m na ị UTM, detuo-achịkọta na Excel table, na-egosi nke ebe ndị na-aghọ a obodo dị ka well'll nwere ha na ndị ọzọ na ebe, ma ọ bụrụ na mgbe eme UTM na ndị ọzọ na ebe, na- nchikota ndi mmadu a na-achogharia ya na ndi mmadu na-acho ebe ozo.
Ndewo, enwere m ihe edere na njirimara na mpaghara 16 kama enwere m ike ịgbanwe ha na mpaghara 15 ka m si eme ya
November, 2009 na
N'etiti nhazi njikwa obodo na UTM enweghị njehie, ọ bụ otu.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta ozizi ahụ iji mee mgbanwe, Gabriel Ortiz na-akọwa ya na isiokwu a.
na-atụgharị kwuru, sị:
dị nnọọ mma gị Usoro, ma m mkpa ịmara na-esi mee ka mgbanwe, ma ọ bụghị digital m n'ịkpali amụrụ anụmanụ mmepụta stoy amụ nche-kwa nke ala na mmiri, n'okwu a m na-arịọ na-egosi na mgbawa na-ekpebi njehie n'etiti abụọ ndị a na-achịkọta, ọ bụghị esi mee ha Ị nwere ike inyere m aka? ihe kachasị mkpa bụ ịgbakọ njehie n'etiti ngalaba abụọ ahụ!
ekele na mbu !!
Ị ga-ahụ ebe kwekọrọ na Google Earth, n'ihi na na Colombia, 17,18 na 19 na-adaba
Hi! Tinye nchekwa data nke nhazi nke ala iji mee ka ha dị nfe ma ihe m nwetara abụghị ihe m tụrụ anya ya. Achọrọ m mgbanwe ahụ maka nhazi na Colombia. Kedu mgbanwe m kwesịrị ime?
Na-egbu nri kwuru, sị:
Hi! Na Plex.Mark! Ị nwere ike ịrụ ọrụ na usoro nhazi gị na Google Earth:
Daniel kwuru, sị:
September, 2009 na
hello! Onye maara otú m ga-esi si UTM gaa Geograficas (degrees) mana na mkpụrụokwu iri, ọ bụghị na nkeji ma ọ bụ sekọnd.
Enwere ngwá ọrụ ọ bụla nke na-enye m ohere ime nke a?
ekele m maka oge gi, na otu nnukwu Geofumadas ..!
Geofumadas na Gabriel Ortiz, na-ekele gị maka mmasị ị na-enyere ndị ọzọ aka! site na Peru m na-ekele gị ..!
GERARDO C kwuru, sị:
August, 2009 na
Ezi Ọrụ na-eme ka ụfọdụ afọ unu OZI NA IT dị nnọọ mma n'eziokwu mara ezigbo mma, m nwere nsogbu mgbanwe nke na-achịkọta UTM ma ọ bụ obodo ụgbọelu, ya bụ mkpa ka ibé ke n'ubi LIVE ACTION OR ụgbọelu Dabere na isi data ihe na uBI na nke nkịtị UTM nrụtụ ma ọ bụ obodo N'EZIE nA NSO nyochaa ọhụrụ njehie UTM achịkọta, OJALA pụrụ inyere m aka
Mundane kwuru, sị:
June, 2009 na
Onye ọ nwere ike ịmasị na m na-ahapụ adreesị nke ibe nke na-enye gị ohere ịnweta nhazi ihu ala na UTM nke ọ bụla:
April, 2009 na
UTM Flayer kwụsịrị, ọtụtụ usoro Zonums ka e mere.
Ị nwere ike ime mgbanwe na Ụdị Excel
Enyi Oliver, NOD 32 abụghị n'efu karịa ụbọchị 30. Ọ bụrụ na ị na-achọ peeji ịzụta ya:
Ọ bụrụ na ịchọrọ antivirus free na-anaghị anwụ, gbalịa Avira
J. Oliver Garcia Rizo kwuru, sị:
Ị nwere ike ime m ihu ọma nke ị nweta m ESET NOD 32 antivirus, enwere m ekele maka ya.
Enwere mmemme UTM Flyer, iji mee mgbanwe ndị ahụ na google ha nyere m, ma ọ nwụlarịrị, ị nwere ike inyere m aka ma nye m ya, ka ọ ghara ịnwụ.
Na Nicaragua, anyị na-arụ ọrụ na 16 na 17 Mpaghara, onye nwere ike inyere m aka.
Achọrọ m ịnweta usoro UTM Flyer ka ọ pụọ na nhazi UTM NAD 27 Central ka Geografica na Google Maps
Echere m na nke ahụ pụtara: Mpaghara 18, x = 338552 y = 9065052 na mpaghara ala ndịda. Nwalee ya na ndebiri. Will ga - ogide
nri na nartel kwuru, sị:
Biko choro ka m chebara ama okwu nke UTME DATA EGO NA-EGO NA-EGO NA-EKWU N'IME:
AKWỤKWỌ AKWỤKWỌ AKWỤKWỌ 18L0338552
LATITUDE UTM 9065052 SOUTH
ekele m maka inyere m aka ịrụ ọrụ m
n'ebe ọdịda anyanwụ 18L0338552
UTM 9065052 ebe ugwu South
March, 2009 na
M na enwetatụbeghị a ihe email site Mario Sánchez gwara anyị na iji expedite ọrụ ha (nke na-amụ na omume nke na aturu grazing site GPS-GPRS necklaces) kwukwara a usoro nke tebụl na-aga site na ntụpọ degrees na sexagesimal-akpaghị aka na a N'ihi ịtinye kpọmkwem n'ime template egeomates gosiri na nke a post.
O kwukwara ụfọdụ usoro iji gbakọọ ebe dị n'agbata nhazi abụọ na ọ bụrụ na ịnwe oge ị na-ewere nhazi ahụ ị ga-enwekwa ọsọ nke njem.
O chere na ma eleghị anya, ọ ga-abara onye ọ bụla uru na o zitere ya na ebe a ha nwere faịlụ ahụ.
Lorenia kwuru, sị:
Ọ bụ ezigbo ngwá ọrụ
February, 2009 na
Lelee nomenclature ahụ nke Gabriel Ortiz na-arịọ maka
Ụdị nkwupụta dị mma:
434156.35 4804758.33 102.44 (nke ọ bụla n'ahịrị, nke mbụ na X na mgbe ahụ Y. Z bụ nhọrọ.)
Jiri ohere oghere ma ọ bụ taabụ iji kewaa ọnọdụ X na Y, yana na ikpe gị Z.
O b ur u na i na-etinye nt i, nke ah u na-enye gi nsogbu.
JAVIER KWU kwuru, sị:
Achọrọ m iji tọghata nhazi X, Y na ngalaba UTM
Etinyewo m data ahụ na CARTOGRAPHIC COORD CONVERSOR nke «Gabriel Ortiz». mana ọ tụpụghị data nke m jiri ya na-atụnyere.
Onye nwere ike inyere m aka?
Ihe data ndị a bụ: X = 622,552.17 / Y = 2,062,181.26
Ihe data a ga - eweghachi bụ: N 64 ° 24 ′ 46.02 ″ E
ma ọ pụtaghị mgbe ị banyere ya.
AKWỤKWỌ m na-abanye bụ: 15 kwekọrọ na Campeche, Mexico.
Kedu ihe m na-emejọ?
Daalụ maka enyemaka n'ọdịnihu.
Alfonso kwuru, sị:
October, 2008 na
ezigbo onye ntụgharị na ụzọ kachasị mma izi ihe nwere ọtụtụ ekele maka nnukwu ọrụ a. ekele m nke ukwuu
September, 2008 na
Luis Felipe kwuru, sị:
Ike, 2008 na
nke a bu usoro nkuzi. biko zigara ya email a. ekele m nke ukwuu
Nke ahụ dị mma maka onye mmụta dị ka m. ị Biko ị ga-ezigara m ozi email a? Ana m ekele gị nke ọma na ọchịchọ kachasị mma na nkuzi amamihe ndị ahụ.
April, 2008 na
Anahí, nke a gosi ihe atụ ị rịọrọ, site na ebe ndịda na Bolivia
Adriana kwuru, sị:
Ọ bụrụ na i tinye na NchNhr / Lee / Grid mpaghara na-egosi, ọ bụrụhaala na ị rụọ ọrụ UTM na Ngwaọrụ / Nhọrọ / 3d View.
Anahí kwuru, sị:
Ezi ọrụ, ọ na-enyere ọtụtụ aka, ajụjụ maka Bolivia dị ka igosipụta mgbanwe nhazi UTM na mpaghara 19, 20 na 21.
Achọrọ m ka ị nyere m aka ịchọta eserese iji gosi ụmụ akwụkwọ nhazi ọ bụla na mpaghara.
Carlos Flores kwuru, sị:
March, 2008 na
Ekele, ọ bụ ezigbo ngwá ọrụ na ezigbo ọrụ.
orestes kwuru, sị:
buru ụzọ kelee gị maka ọrụ dị iche iche ị na-arụ nke abụọ maka ịnye ihe ọmụma gị 'nye ndị ọzọ ndị, dị ka m, enweghị ọtụtụ ozi, karịa ọtụtụ ihe mere ị ga - eji gaa ihu ọma
Autodesk 3ds Max Agụmakwụkwọ
Mụta Autodesk 3ds Max Autodesk 3ds Max, bụ sọftụwia zuru oke na-enye ngwaọrụ niile enwere ike iji mepụta ...
Usoro 3D Civil maka ọrụ obodo - ọkwa 2
Mgbakọ, na-ebupụta, akụkụ obe, cubing. Mụta imepụta atụmatụ na ọrụ linear na Autocad Civil3D sọftụwia etinyere ...
Mụta ihe eji arụ ọrụ siri ike na nhazi igwe site na iji sọftụwia Revit Structure na Advanced Steel Design. Kere mesiri ike ihe ...